Mustaqbalka, Kaniisadda Adduunka ee Ilaah Switzerland (WKG)
Waad ogtahay injiilku inuu yahay warka wanaagsan. Laakiin dhab ahaan ma u tixgelisaa war wanaagsan? Sida intiinna idinka mid ah, noloshayda inteeda badan waxaa la i baray inaan ku nool nahay maalmihii la soo dhaafay. Tani waxay i siisay aragti adduunka ka eegaysa arrimaha marka loo eego adduunku in dhamaadka adduunku yahay sida aan ognahay in maanta ay imaneyso dhawr sano gudahood. Laakiin haddii aan u dhaqmo sida saxda ah, waan ...
Maxaad u malaynaysaa inay tahay dhacdada ugu weyn ee ka dhici karta masraxa adduunka? Dagaal kale oo adduunka ah? Soo helitaanka daawo loogu talagalay cudur daran? Nabadda adduunka, mar iyo dhammaan? Laga yaabee xiriiriyaha sirdoonka shisheeye? Malaayiin Masiixiyiin ah, jawaabta su'aashan waa mid fudud: dhacdada ugu weyn ee weligeed dhici doonta waa imaatinka labaad ee Ciise Masiix. Farriinta udub-dhexaadka ah ee Kitaabka Quduuska ah ...
Muxuu jirku u dhimanayaa qofka dhintay?
Dhammaan Masiixiyiintu waxay rajeynayaan in rumaystayaashu ay u kici doonaan nolosha aan dhiman karin markuu Masiixu muuqdo. Sidaa darteed la yaab malaha in rasuul Bawlos, markii uu maqlay in qaar ka mid ah Kaniisadda Korintos ay diidayaan sarakicidda, si adag ayay u diideen faham la’aantoodii warqaddiisii ​​ugu horraysay ee uu u diray Korintos, cutubka 1. Waxa ugu horreeya ee Bawlos ku celceliyo wuxuu ahaa farriinta injiilka, oo ay iyaguna ku andacoonayaan: Masiixu inuu ...
Weligaa ma haysatay sabab aad ku ciqaabto ilmo aan addeecin? Weligaa ma sheegatay in ciqaabtu weligeed dhammaan doonin? Waxaan hayaa dhowr su'aalood oo dhammaanteen ah oo carruurta leh. Waa tan su'aasha koowaad: Ilmahaagu weligiis ma ku caasiyoobay? Hagaag, waqti yar qaado si aad uga fikirto haddii aadan hubin. Hagaag, hadaad ugu jawaabtay haa sida dhamaan waalidiinta kale, hada waxaan u nimid su'aasha labaad: ...
Injiilku wuxuu macnihiisu yahay "war wanaagsan". Muddo sanado ah, injiilku war fiican umay ahayn sababtoo ah waxaa lay baray inta badan noloshayda in aan ku nool nahay maalmihii la soo dhaafay. Waxaan rumeysanahay in "dhamaadka adduunka" uu imaan doono dhowr sano, laakiin haddii aan u dhaqmo sida saxda ah, waan ka badbaadi doonaa dhibaatada weyn. Noocan aragtida adduunku waxay noqon kartaa wax balwad leh, marka waxaad u egtahay inaad wax walba adduunka ka qabato ...
Anigaa soo laaban doona oo weligay ku jiri doonaa!
"Waa run in aan aado oo aan kuu diyaariyo meel, laakiin sidoo kale waa run in aan u soo noqdo oo aan kuu qaado oo aad adiguna joogtid halka aan joogno (Yooxanaa 14,3). Miyaad weligaa damac qoto dheer u qabtay wax dhowaan dhici doona? Masiixiyiinta oo dhan, xitaa kuwa qarnigii hore, waxay u rajeynayeen soo laabashada Masiixa, laakiin waagaas iyo waagaas waxay ku muujiyeen salaadda fudud ee Aramaatiga: "Maranatha", oo macnaheedu yahay ...
Haddii aysan jirin wax mustaqbal ah, Bawlos wuxuu qoray, inay nacasnimo tahay in Masiixa la rumeeyo (1 Korintos 15,19). Sheegiddu waa qayb muhiim ah oo aad u dhiirigelisa iimaanka Masiixiyiinta. Wax sii sheegidda Baybalka ayaa inoo sheegaysa wax aad u rajo leh. Waxaan ka soo qaadan karnaa xoog iyo geesinimo hadii aan diirada saarno fariimaheeda muhiimka ah, kuma eka faahfaahinta lagu murmi karo. Ujeedada wax sii sheegidda ma aha dhamaadka lafteeda - waxay qeexeysaa ...
Eine kleine Raupe bewegt sich mühsam vorwärts. Sie streckt sich in die Höhe, da sie gerne die etwas höheren Blätter erreichen möchte, weil diese schmackhafter sind. Da entdeckt sie einen Schmetterling, der auf einer Blume sitzt und sich vom Wind hin und her wiegen lässt. Schön ist er und farbenprächtig. Sie beobachtet ihn, wie er von Blume zu Blume fliegt. Ein bisschen neidvoll ruft sie ihm zu: «Du Glücklicher, fliegst von Blume zu Blume, strahlst in herrlichen…
Haddii aan fahamsanahay inaan ku nool nahay, ku dheelno oo aan ku jirno Masiixa (Falimaha Rasuullada 17,28), Eebaha abuuray wax walba oo wax walba ku furtay, oo aan shuruud la'aan ku jecel, waxaan dhammaanteen ka baqi karnaa oo ka walaacnaa halka aan joogno Istaag, hoos dhig, oo bilow inaad runtii nasato nolosheena adigoo garanaya jacaylkiisa iyo awooda hanuuninta. Injiilku waa war wanaagsan. Xaqiiqdii, ma ahan oo keliya dhowr dad ah, laakiin qof walba ...
Es wird wohl immer jemanden geben, der behauptet, ein Prophet zu sein oder glaubt, das Datum der Rückkehr Jesu berechnen zu können. Vor kurzem sah ich einen Bericht über einen Rabbiner, der angeblich die Vorhersagen des Nostradamus mit der Thora verbinden konnte. Eine andere Person sagte voraus, dass Jesu Wiederkunft zu Pfingsten 2019 stattfinden werde. Viele Prophetie-Liebhaber versuchen, eine Verbindung zwischen den aktuellen Nachrichten und den biblischen…
Waxba ma iibiyaan sidoo kale waxsii sheegyada. Waa run. Kaniisad ama hawlgal waxay lahaan karaan fiqiga doqonnimada ah, hoggaamiye aan caadi ahayn, iyo xeerar aan micno lahayn, laakiin waxay leeyihiin khariidado adduunka ah oo kooban, maqas, iyo wargeysyo badan, oo ay la socdaan wacdiye si macquul ah u sheegi kara, waxay umuuqataa inay dadku u dirayaan baaldiyo lacag ah. Dadku waxay ka baqayaan wax aan la garan oo waxay garanayaan ...
Waxay i xasuusisay muuqaalo laga soo qaaday filim jilicsan oo sayniska ah markii aan maqlay wax ku saabsan daahfurka meeraha dhulka u eg oo la yiraahdo Proxima Centauri. Waxay ku jirtaa meeraha xiddigta casaanka ah ee Proxima Centauri. Si kastaba ha noqotee, uma badna in aan ka heli doonno nolosha ka baxsan dhul-ka-baxsan (fogaan ah 40 tiriliyan kilomitir!). Si kastaba ha noqotee, dadku had iyo jeer waxay isweydiinayaan naftooda haddii ay jiraan nolol aadanaha oo kale ah oo ka baxsan ta ...
Markii dadku isugu soo urureen kaniisadaha ku yaal Ameerika iyo dalal kale maalinta maalinta baroor-diiqda, Sebtember 14, 2001, waxay u yimaadeen inay maqlaan ereyada raaxada, dhiirigalinta, iyo rajada. Si kastaba ha noqotee, tiro ka mid ah hoggaamiyeyaasha kaniisadaha Masiixiyiinta ee muxaafidka ah - ayagoo ka soo horjeedo ujeedadooda ah in ay rajo siiso umadda dhibaataysan - ayaga oo si ula kac ah u faafinaya farriin sii hurinaya rajo xumada, niyad jab, iyo cabsi Waxaa loola jeedaa, dadka u dhow weerarka ...
Weligaa miyaad dooneysay qof inuu albaabkaaga garaaco isagoo og in adeer hodan ah oo aadan weligaa maqal uu dhiman doono oo uu kaa tegi lahaa nasiib aad u weyn? Fikradda ah in lacagtu ay ka soo baxdo meelna waa mid xiiso badan, riyo dad badan iyo ujeedo buugaag iyo filimaan badan. Maxaad ku sameyn lahayd hodankaaga cusub ee aad heshay? Saameyn bay ku yeelan doontaa noloshaada? Miyuu ...
Saxanka ayaa imanaya! Xukunka ayaa imanaya! Toobad keena imminka ama waxaad geli doontaa cadaabta ”. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay qaar wacdiyayaal ah oo wareegaya oo qaylinaya ereyadan isku dayaya inay dadka ka cabsiiyaan inay galaan ballanqaad Masiixa. Ama, waxaad u aragtay inuu qof noocan oo kale ah ku dhex jiifayo filimo leh muuqaal muuqata. Laga yaabee in tani aysan sidaa uga fogeyn muuqaalka "xukun daa'im ah" oo dad badani ay ...
Sarakicidda iyo soo noqoshada Ciise Masiix
Falimaha Rasuullada 1,9 ayaa naloo sheegay: "Oo markuu yidhi, Isaga kor buu u qaaday, daruur baa indhahooda ka qaaday." Waxaan jecelahay inaan weydiiyo su'aal fudud markan: Maxay tahay sababta? Muxuu Ciise sidan ugu qaatay? Laakiin inta aynaan taas gaarin, waxaan akhrinaa saddexda aayadood ee soo socda: “Oo markay daawadeen intuu jannada ku jiray, waxaa la jiray laba nin oo dhar cadcad la jiray. Waxay dhaheen: Ragg ...